Farmaajo oo la kulmay dhakhaatiirta la tacaalaya COVID-19 (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Farmaajo oo la kulmay dhakhaatiirta la tacaalaya COVID-19 (SAWIRRO)
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay kulan dhiirigelin ah la qaatay qaar ka mid ah dhakhaatiirta iyo adeegayaasha caafimaad ee la tacaalaya xakameynta cudurka COVID-19 ayaa ku bogaadiyay dadaaladooda naf hurka ah, ee ay ku bixinayaan ilaalinta badqabka caafimaad ee shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa soo bandhigay dadaalada ay Dowladda Federaalka gelisay kor u qaadidda adeegyada caafimaad ee dalka iyo guulaha la taaban karo ee laga gaaray xakameynta cudurka, iyada oo sidoo kale xil gaar ah la iska saaray daryeelka adeegayaasha caafimaadka.
“Waxaad aad tihiin halyeeyo baal dahab ah ka gelaya taariikhda dalkan. Waxaan idiin ka mahadcelinayaa sida geesinimada, naf hurka iyo daacadnimadu ku jirto ee habeen iyo maalinba aad ugu soo jeedaan shacabkiina iyo sidii aan u xakameyn lahayn halista caafimaad ee cudurkan safmarka ah.”
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in loo hoggaansamo talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabkooda, iyadoo ay weli taagan tahay khatarta COVID018. Madaxweynaha ayaa adkeeyay walwalka ku aaddan halista ka imaan karta in mowjadaha cusub ee cudurkani dalka soo gaaraan, isaga oo ku booriyay shacabka in ay qaataan tallaalka COVID-19, si ay ka hortag ugu noqoto cudurkan safmarka ah.
“Waxaan idinku boorinayaa in aad u dhega nuglaataan talooyinka caafimaad, oo aad qaadataan tallaalka cudurka COVID-19, waa ka hortag wanaagsan wax dhibaato ahna malaha. Talaalka anigu waan qaatay dad badan oo Soomaaliyeedna way qaateen, waana ka hortag aan dhib lahayn. Ilaahay aan talo saaranno oo aan dadaalno.”
Kulankan oo ay goobjoog ka ahayd Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Marwo Foosiya Abiikar Nuur iyo Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Caafimaadka, Axmed Xuseen Macallin ayaa dhakhaatiirtu waxa ay Madaxweynaha kula wadaageen warbixin ku saabsan halista cudurkan safmarka ah, saameynta uu ku yeeshay dalkeena iyo duruufaha ay ku shaqeynayaan halyeeyada caafimaadka, ee u taagan samata-bixinta dadkeena.
Previous articleRa’iisal Wasaare Rooble oo la kulmay Danjiraha Turkiga ee dalka
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo gaaray Magaalada Jeddah